Home News Burundi oo qaaday talaabo Q.M ka careeysiisay!!
Burundi oo qaaday talaabo Q.M ka careeysiisay!!
Madaxda Burundi ayaa amray in guddiga xuquuqda aadanaha ee Qaramada Midoobay uu xafiisyadiisa albaabada isugu laabo muddo labo toddobaad ah, sida ay ilo ka tirsan Qaramada Midoobay ay sheegeen.
“Dawladda Burundi ayaa xagjir sii noqonaysa, beesha caalamkana ka dhago adaygaysa” sida uu wakaaladda wararka ee AFP u sheegay qof aan magaciisa la shaacinin oo Qaramada Midoobay ka tirsan.
Burundi ayaa isaga baxday shirkii Urur goboleedka Bariga Afrika ee bishii Nofembar la qabtay, kaasoo la rabay in diiradda lagu saaro qaska ka taagan Burundi.
Sannadkii 2017 Burundi ayaa isaga baxday Maxkamadda Caalamiga ah ee Dambiyada ee magaceeda loo soo gaabiyo ICC.
Rabshado ayaa dalkaas ka billawday sannadkii 2015kii markaas oo madaxweyne Pierre Nkurunziza uu u tartamayay markii saddexaad.
Daganaansho la’aantii siyaasadeed ayaa horseeday boqolaal dhimasho ah in ka badan 400,000 ruuxna dalka ayay isaga qaxeen, sida ay Qaramada Midoobay sheegtay.
Talaabadan ayaa waxaa aad uga carooday Qaramada Midoobay, waxaana sii kordhaya cabsida laga qabo in dalkaas uu dib ugu laabto dagaaladii Sokeeye ee dalkaas ka jiray toban sano ka hor.
Previous articleGalmudug oo sameeysaneeyso Ciidan xoogan
Next articleCiidamo Cusub oo boolis ah oo Tababar loosoo xiray (SAWIRO)
Farmajo Iyo Kheyre: Waxaan Dalka Ku soo Celinnay adduunyada! Tolow Maxaa...
Beesha Caalamka oo war ka soo saartay dagaalka Tukaraq